गोपनीयता नीति - प्रो गियर देखि मुन्सिइ PTO & प्रसारण
हाम्रो वेबसाइट ठेगाना हो: https://rebuiltchelseapto.com/staging.
हामी यो के व्यक्तिगत डाटा हामीले सङ्कलन र किन सङ्कलन
तपाईं हाम्रो साइट मा एक टिप्पणी छोड्दा तपाईं अप्ट-मा हुन सक्छ तपाईंको नाम सुरक्षित गर्न, कुकीहरू इमेल ठेगाना र वेबसाइट. तपाईँले अर्को टिप्पणी छोड्नुहोस् फेरि आफ्नो विवरण भर्न छैन भनेर यी आफ्नो सुविधाको लागि हो. यी कुकीहरू एक वर्षको लागि पछिल्लो हुनेछ.
अन्य वेबसाइटहरूमा बाट एम्बेड सामग्री
यो लेख साइट मा इमबेट सामग्रीमा (जस्तै. भिडियो, तस्बिरहरू, लेख, आदि). अन्य वेबसाइटहरूमा बाट एम्बेड सामग्री नै सटीक तरिकामा व्यवहार गर्ने आगन्तुक अन्य वेबसाइट भ्रमण भने.
यी वेबसाइटहरूमा तपाईं डेटा सङ्कलन गर्न सक्छन्, कुकीहरू प्रयोग, इम्बेड अतिरिक्त तेस्रो-पक्ष ट्र्याकिङ, र सम्मिलित सामग्री तपाईंको अन्तरक्रिया निगरानी, एउटा खाता छ र वेबसाइट मा लग इन हुनुहुन्छ भने सहित सम्मिलित सामग्री तपाईंको अन्तरक्रिया tracing.
तपाईंको डाटा के अधिकार तपाईं
तपाईं हामी कुनै पनि व्यक्तिगत डाटा हामी तपाईंलाई बारेमा पकड मेटाउन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ. यो हामी प्रशासनिक लागि राख्न बाध्य छन् कुनै पनि डेटा समावेश गर्दैन, कानुनी, वा सुरक्षा उद्देश्यका.